ရိုဟင်ဂျာအရေး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံ ပါကစ္စတန် သမ္မတ စာပေးပို့
ရိုဟင်ဂျာအရေး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံ ပါကစ္စတန် သမ္မတ စာပေးပို့ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရိုဟင်ဂျာ မူဆလင်တွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်တွေ ဆုံးရှုံးနေရတဲ့အပေါ် ပါကစ္စတန်အစိုးရနဲ့ ပြည်သူတွေက အလေးအနက် စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း ပါကစ္စတန် သမ္မတ အလီ ဇာဒါရီက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံကို မနေ့က စာရေးသား ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။
ပါကစ္စတန် သမ္မတရဲ့ပေးစာမှာ - ရိုဟင်ဂျာ မူဆလင်တွေ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ပြန်ပြီး လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ဘ၀ ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို မြန်မြန်ထက်ထက် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ဦးသိန်းစိန်ကို တိုက်တွန်းထားပြီး၊ မတူညီတဲ့ လူအုပ်စု အချင်းချင်း ငြိမ်းငြိမ်း ချမ်းချမ်း အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်နိုင်တာဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ တက်လှမ်းရေး အစီအစဉ် အားကောင်း မောင်းသန်ဖြစ်လာဖို့အတွက် အရေးကြီးကြောင်း၊ ရပ်ရွာတွင်း နေထိုင်သူတွေ သဟဇာတဖြစ်မှ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အသီးအပွင့်တွေကို ခံစားနိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါမှသာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် နောက်ပြန် မဆုတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း အလေးပေး ဖော်ပြထားပါတယ်။
Citizen of MM this is not what you don't need to worry about our country instead please try to manage you our country not to get any boom blast in your country, try to clear in your country that you have lots of terrorist groups including Taliban. Please let me suggest you just try to concentrate your own matters. Aug 15, 2012 06:49 PM
Aug 12, 2012 12:27 PM
Aug 09, 2012 02:04 PM
Dear Pakistan President,
If you are very pity about Rohingya, please come and pick them to your PAKISTAN!!!!!!!!!! Will u?
Aug 09, 2012 05:18 AM
ကျတော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ဘယ်ဒေသမဆို တရားမ၀င်တဲ့ နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့သူတွေကို ဒီနိုင်ငံအတွက် ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်း ကို အထိခိုက်မခံနိုင်ပါ၊ သူတို့နိုင်ငံသား ရိုဟင်ဂျာတွေကို စိုးရိမ်နေပါလျှင် သူတို့ပါကစ္စတန် ကိုပဲပြန်ခေါ်သွားပါ။ ကျတော်တို့နိုင်ငံသည် အလိုမရှိ။ Aug 09, 2012 05:11 AM